Fọrọ nke nta niile itieutom eji kọmputa na ọ bụ ya mere amamihe na-eji mma na-esi naghachi-ehichapụ information.There na-ise n'elu ụzọ n'ihi na ị weghachite furu efu data gị ike mbanye n'okpuru. All nwere onwe ha uru na ọghọm. Biko họrọ onye kasị mma maka onwe gị.
Sistem: Windows 7/2003 / XP / 2000, Mac OS X, Linux
Photo rec bụ otu n'ime tụkwasịrị obi software eji na data mgbake.
• Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na draịvụ ike mgbake na ebe ọ bụ na ọ bụ ike na-agba ọsọ n'okpuru iche iche na ụdị nke sistem na ọ bụ ezi nhọrọ maka nlaghachie nke ehichapụ oyiyi, foto na ụdị ndị ọzọ nke akwụkwọ echekwara na draịvụ ike.
• The ẹdude faịlụ usoro kwesịrị dịghị mkpa a software e mere na-site rue usoro iji weghachi niile ehichapụ data si abụba, exFAT, HFS + na di na nwunye ndị ọzọ faịlụ usoro.
• Naghachi foto nke ọ bụla usoro
• Ọ bụghị na GUI format
Sistem: Windows 8/7/2003 / XP / 2000, Vista
Recuva bụ ndị ọzọ siri ike mbanye mgbake software na
• Ọ nwere ike nweta for free na nwere ike ibudata kpọmkwem site Internet.
• Nke a ndokwa agaghị eme ka ọ bụla obere irè n'ihi na ọ nwere ikike naghachi dị iche iche nke faịlụ furu efu gị Windows kọmputa dị ka a n'ihi nke virus agha, ike anya ma ọ bụ na mberede nhichapụ.
• Ya mgbake ikike na ọ bụghị nanị kọmputa naanị ọ bụkwa uru na igwefoto dijitalụ kaadị gbakwunyere ọ pụkwara akpọghachite ndị gị MP3 furu efu faịlụ. Nweta free version ma hụ otú o si arụ ọrụ ọma
• Weghachi data ma hichapụ data ike
• nnọọ ezigbo iji
• Ebe ọ bụ free ọ ghara naghachi ụfọdụ data.
Sistem: Windows 7/2003 / XP / 2000, Vista
E nwere ndị agụsi ọrụ nke undelete 360 na-ahọrọ ọ na-ọzọ software kenyere maka ike mbanye data mgbake.
• Ọ na-enye ohere ọrụ naghachi voluminous data a na-apụghị Ewepụtara si egweri biini.
• Ụdị ọ bụla nke na-ehichapụ data na usoro nke ị -arụ ọrụ na nnofega na ihichapụ igodo, ịkpụ na mado iwu nile pụrụ-natara
• Ya ebe nke iche iche na ọ bụghị nanị ike draịva naanị ma-emekọ dijitalụ ese foto, USB Flash draịva na ndị ọzọ na mpụga nchekwa ngwaọrụ na-eji na kọmputa na ihe ọ bụla ọzọ ụdị nke mgbasa ozi gadget.
• Ọ bụ free na ngwa ngwa
• Awesome search nzacha
• Nwere kwukwara atụmatụ nke faịlụ wiping
• Ka ịhụ ụfọdụ data
4 Naghachi My Files
Naghachi My Files software bụ bara uru mgbe mmadụ na mberede clicks na Nhichapụ iwu mgbe ekpocha gị mail igbe na na usoro ihe dị mkpa mail na-ehichapụ. The ehichapụ Gburu nwere ike inweta na enyemaka nke a flash mbanye mgbake software na ike ga-enwetara site na ọnọdụ ọ bụla na-eji internet.
• Ọ na-eje ozi ndị ọzọ yiri ọrụ gụnyere mgbake nke ehichapụ photos, music ma ọ bụla ọzọ faịlụ.
• Iji Download version a onye ọrụ nwere ike ihuchalu faịlụ mbụ niile maka mfe njirimara na mweghachi nke achọrọ faịlụ naanị.
• Ke adianade atụmatụ ndị a ọ bụkwa mfe iji na-achọ ala etoju nke nkà na ime nke software.
• Weghachi niile ụdị data
• Naghachi mpụga draịva.
• Ẹda a miri emi search
• Enye ohere mmachi nhọrọ nke search.
Na-Naghachi My Files
Sistem: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / 2000 / XP
Ndepụta bụ ezughị ezu na-enweghị banyere nke Wondershare Data Recovery software. Ọ na-emetụta anọ dị iche iche mgbake ụzọ iji hụ na niile ehichapụ data na-Ewepụtara site color, MP3 / MP4 na dijitalụ ese foto ndị ọzọ multimedia ngwaọrụ.
• Ọ dịla ike nke na-ejizi ihe karịrị 400 dị iche iche nke faịlụ formats na dị na kọmputa ike draịva na ihe ọ bụla ndị ọzọ nke oge nchekwa ngwaọrụ.
• Nke a bụ otu n'ime disk mgbake software na bụ enyi na enyi na okwu nke na-eri na irè dị ka nke ọma.
• Ọ na-enye ihe ize ndụ-free ike mbanye mgbake ọrụ na-ebenata emebi ka natara data.
• Ya Gụọ naanị mma na-eme ya ezi nhọrọ na mpụga ike mbanye mgbake.
E nwere ọnụ ọgụgụ nke ike mbanye data mgbake software na ahịa ma e nwere ole na ole a nwalere na enen na-enye results atụ anya site onye ọrụ. Mara onwe gị na dị diski ike mgbake software na-enyere gị iji naghachi niile ehichapụ data ka ị a disk mgbake pụtara na ị pụrụ ịdabere na ha.
•-enye ezi ọrụ tụnyere ndị ọzọ data mgbake software si.
• mfe na mfe iji.
• Ntụziaka iji.
• Ọ na-ukwuu emetụta mgbanwe na nkà na ụzụ na ọ bụrụ na ihe nzukọ nwere ike ọ gaghị enwe ike ike ruo ụbọchị na mgbanwe, nke a nwere ike ime ka software gharazie ịba uru.
> Resource> Draịvụ> Top 5 Draịvụ Data Recovery Software